sosegado : လူသစ်
Posted by sosegado at 11/21/2010 10:44:00 PM
လူသစ် တဲ့ လား ..
နောက်မှ ဝင်ဖတ်တော့ မယ်၊
pls continue asap.
တကယ်ဖြစ်မလာဘူးလို့တောင် ပြောလို့ မရတော့ဘူး
ဟိုတုန်းက သိပ္ပံပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကာတွန်းတွေ ၀တ္ထုတွေကို လူတွေက စိတ်ကူးယဉ်တွေ.. တကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ကြပေမဲ့ ခုချိန်မှာအဲဒီအတိုင်း တကယ်ကို ဖြစ်လာတာတွေ ရှိလာတယ်..
သိပ်မကြာခင်ကလည်း နောင်လာမဲ့နှစ်မကြာခင်မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး လူတွေ နေစရာရှားပါးလာလို့ လူတစ်ယောက်ကို ၃ပေစာ အိပ်စရာနေရာလေးတစ်နေရာဘဲ ပေးနိုင်တော့တယ်ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုလေးဖတ်လိုက်ရတယ်..
တကယ်များ ဖြစ်လာရင်လို့ စဉ်းစားပြီး စိတ်လေးမိတယ်.. အဲဒါလည်း မဖြစ်လာဘူးလို့မှ ပြောမရတာကို..ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက များများလာတယ်.. ခု ကိုဆိုဆီ ၀တ္ထုလဲ ဒီလိုဘဲ
ကမ္ဘာကြီးက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုပြီး ပူပြင်းလာနေတာ လက်တွေ့ဘဲလေ
ဒီတော့ နောင်လာမဲ့ နှစ်တွေမှာ ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ.. ပိုဆိုးဖို့ဘဲ ရှိတော့မှာပေါ့။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်.. ဆက်ရန်ကို စောင့်နေပါတယ်..
အိုး ..... ဒဂယ် ပဲ အဲလိုတွေ ဖစ်လာရင် ဒွတ်ခ ပဲ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ဖေါ်ပြမယ်ဆိုတော့ ဆက်ဖတ်ရမှာပေါ့လေ...
အဟီး ...အရင်အကြွေးတွေတောင် ကုန်အောင် နဖတ်နိုင်တေးဝူးဂျ
စိတ်ကူးစိတ်သန်းပုံပြင်တစ်ခုဆိုပေမယ့် တကယ့်ကို စာဖတ်သူကို စွဲခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကို sosegado .. အခုလို အချိတ်အဆက်မိမိ ရေးနိုင်တာ တကယ်ချီးကျူးမိပါတယ်။
အခုလို သိပ္ပံဆန်ဆန်အကြောင်းအရာရုပ်ရှင်တွေဆို တအားစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ပိုစ်အဆက်ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
ခေါင်းကိုမူးသွားတာဘဲ လူဟောင်းလေး လာဖတ်သွားတယ်ဗျို့ ဆက်လည်း ဖတ်ပါ့မယ် လို့ မရဲတရဲ လေး ဂတိပေးသွားပါတယ်
စိတ်ယင်စားဖို့ကောင်းတယ်.... အိမ်ရောက်မှ အမျိုးသားကို ပေးဖတ်လိုက်ဦးမယ်... သူက ဒါမျိုးတွေကို ပူးတေထက် ပိုစိတ်ယင်စားတယ်... ဒါမျိုးတွေ တနေ့ကျ ဖြစ်မလာဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူးချည်း ပြောနေတာ...
ရှေ့မျှော်အတည်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ၀တ္တုတွေဆိုရင် စိတ်ဝင်တစားဖတ်ဖြစ်တယ်။ အခုဟာကို စဖတ်တုန်းက ဟာသလုပ်မယ်ထင်ထားတာ။ နောက်ပိုင်းတွေကို စောင့်ဖတ်နေမယ်ဗျာ။
စိတ်ဝင်စားမိတယ်၊ ကမ္ဘာသစ်မဟုတ်ပဲ လူသစ်ဆိုတော့၊
နောက်နှစ်ပိုင်း၂၀၀ မှာအဲဒီလောက်ပူရင် နောင် ဆယ်နှစ် ဘယ်လောက်ပူမယ်မသိဘူး၊
သစ္စာလေးပါး ကိုရှာဖွေ တယ်ဆိုတာတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ကျွန်တော်လည်း ဒါမျိုးလေးတွေ ရေးနိုင်ဘို့ 
အား... ဖတ်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်းကြောက်တောင်လာတယ်။လူတွေ တော်တော်ရုပ်ဆိုးလာတော့မှာပါလားးးးးးးးးးးး
သဘောကျတယ်ဗျာ။အပျော်ဖတ်တွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကြားမှာ တကူးတက စဉ်းစားပြီး ရေးလို့ အားပေးပါတယ်။
ဒီလိုလေးတွေ ကြိုက်တယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့. . . သိပ္ပံဇာတ်လမ်းလေးတွေကို သဘောကျမိတယ်။ ဆက်ပါဦး။
လူအသစ်ဖြစ်သွားမယ်လို့ မတွေးခဲ့ဖူးဘူး၊ ကွယ်ပျောက်သွားမယ်ပဲထင်ခဲ့တာ၊
အင်း တော်သေးတာပေါ့ မျက်လုံးမပြောင်းလို့
ဖန်တီးထားတဲ့ စိတ်ကူးအဆန်းလေးကိုတော့ သဘောကျတယ်ဗျာ။ အဆက်ကို လာဖတ်အောင်ဖတ်မယ်ဗျာ ...
တကယ် ဖြစ်လာမလား ပဲး)
မိပါ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါ၏။ ခုမှပဲ (၁)
နဲ့ (၂) သေချာပေါင်းမိတော့တယ်ရှင်။ :)